I-Samsung Galaxy S8 ibuye ibonwe esithombeni esihlungiwe | Izindaba zamagajethi
El Samsung Galaxy S8 Kusezindebeni zomuntu wonke futhi kunenqwaba yamahemuhemu asevele asabalala kunethiwekhi yamanethiwekhi mayelana nokuthi kuzoba yini i-flagship entsha ye-Samsung. Sikwazile ukufunda nokuzwa ukuthi izongena emakethe ngo-Ephreli ozayo, futhi izokwethulwa kwi-Mobile World Congress, ezofaka ikhamera embaxambili kuphela kunguqulo yayo ye-Premium njengoba kwenza i-Apple noma ezoba nenani eliphakeme kune i I-Galaxy S7 onqenqemeni.
Okwamanje wonke la mahemuhemu awakaqinisekiswa yiSamsung, kepha nawo awazange awaphike. Kukho konke lokhu namhlanje kungezwe u isithombe esisha esihlungiwe se-Galaxy S8, esinekhwalithi enhle kakhulu futhi ebukeka ingeyangempela.
Kulesi sithombe ongasibona siqondisa le ndatshana, i-Galaxy S8 entsha ikhonjiswa kubo bonke ubukhazikhazi bayo, isivumela ukuba sibone i-terminal enefreyimu encane kakhulu engenhla nangaphansi, futhi lokho kuvumelana kakhulu nokuvuza kwangaphambilini okwenzekile isikhathi esithile manje.amasonto.
Isibonisi sigobile ezinhlangothini zombili futhi kubonakala sengathi sikhulu, eqinisekisa futhi ukuthi i-flagship entsha ye-Samsung izothinta ama-intshi ayi-6 kuhlobo lwayo lwePrimiyamu. Okungasekho mkhondo yinkinobho yasekhaya eye yanyamalala ngaphambili, into esingeke siyiphuthe. Vele kuzofanele sibone ukuthi umfundi wezigxivizo zeminwe ukutholakala kuphi, okungenzeka ukuthi angahlanganiswa nesikrini.
Okwamanje, kufanele siqhubeke nokulinda ukuvuza okusha kwe-Galaxy S8 elindelekile ukuthi yenzeke noma ukuthi yethulwe ngokusemthethweni, okuyinto njengoba sishilo ngaphambili cishe izokwenzeka ngaphakathi kohlaka lwe-Mobile World Congress ezobanjelwa eBarcelona.
Ucabangani ngokuklanywa kwe-Samsung Galaxy S8 entsha namuhla esikwazile ukuyibona cishe ngokuphelele esithombeni esisha esivele kunethiwekhi yamanethiwekhi?.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-Samsung Galaxy S8 ingabonakala futhi esithombeni esihlungiwe esibonakala singokoqobo impela